thinzar's blog: An IT fresh grad’s diary
ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ သမ္မာအာဇီဝလည်း ဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလည်း ဖြစ်နေရင် စိုပြေနေမှာပါပဲ။ အားပေးနေပါတယ်၊ စင်္ကာပူအလည်လာရင် မုန့်ကျွေးဖို့အသင့်ပါပဲ။
1/2/08 4:13 AM
"No matter what the problem is,
it's alwaysapeople problem."
:) thats whats happening in software industries.
3/2/08 3:46 PM
အတွေ့အကြုံဟာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အရင်းအနှီးပါပဲ ဆိုတဲ့စကားတော့ မှတ်သားဖူးတယ်။
လောလောဆယ်တော့ မသဉ္စာ ရူးချင်ချင်ဖြစ်နေပြီပေါ့။ :) အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
စကားမစပ်- ဟိုအော် ဒီအော် အော်ဖို့ ထားတဲ့ဘောက်စ်" ပျောက်နေပါလား။ ဖြုတ်ထားတယ်ထင်တယ်။
5/2/08 7:44 AM
အင်း မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ ပြောပြရအုံးမယ်။
ကျွန်တော်က Blog ရေးဒါ ဝါဒနာမပါဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်း internet မာလူတကာသိအောင် မပြောပြတတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့လိုအပ်မယ်ထင်ရင်တော့ ကွန်းမင့် ပေးဒါ ဝါဒနာပါ ပါဒယ်။
Software development နဲ့ IT field မှာကြင်လည်လာဒါတော့ 15 နှစ်ကြာလောက်ရှိပါပြီ။
Thinzar မသိတာနဲ့ လိုအပ်ဒါ ရှိရင် ပြောပြနိုင် Reference လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားမနာနဲ့နော်။
5/2/08 11:30 AM
ကို TZA>> "ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ သမ္မာအာဇီဝလည်း ဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလည်း ဖြစ်နေရင် စိုပြေနေမှာပါပဲ။" ဒီလို အားပေးတာ အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ မျှော်လင့် ရပါတယ်။ မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်ဆိုတော့ 一言为定 နော်။ :)
last>> yeah.. u r right.
Mbl0g ger>> ဟုတ်တယ်။ ရူးချင်ချင် ဖြစ်နေပြီ။
ဟိုအော်တဲ့ဘောက်စ်က ခဏ ဖြုတ်ထားတာ။ စိတ်နည်းနည်း ရှုပ်လာလို့။
5/2/08 1:20 PM